प्रणय दिवशकै छेको पारेर ‘माई भ्यालेनटाइन’ नामक फिल्म सार्वजनिक, हेर्नुहोस् पूरा फिल्म – Etajakhabar
प्रणय दिवशकै छेको पारेर ‘माई भ्यालेनटाइन’ नामक फिल्म सार्वजनिक, हेर्नुहोस् पूरा फिल्म
‘माई भ्यालेनटाइन’ अर्थात मेरो भ्यालेनटाइन । शीर्षक नै काफी छ कि यो पक्कै एउटा प्रेमकथा हो । १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रणय दिवशलाई लक्षित छोटो फिल्म हो, ‘माई भ्यालेनटाइन’ । ‘भ्यालेनटाइन–डे’ लाई युवापुस्ता भनौ या प्रेमिल जोडीले महत्वका साथ लिइरहेका बेला यो फिल्म सार्वजनिक गरिएको हो ।
एउटा प्रेमकथा हो ‘माई भ्यालेनटाइन’ । तर, कस्तो प्रेमकथा ? हेर्दैजाँदा तपाईँमा प्रश्न उठ्न सक्छ । तपार्इँलाई रीस पनि उठ्न सक्ला कि ? किनकि, यो एउटा यस्तो प्रेम जो आमासँग तुलना गरिएको छ । तपाइँ आफै सोच्नुस् कि, आफ्नी आमासँग प्रेमिकासँग तुलना गर्नु न्यायचित हो कि होइन ? हुन यो आधुनिक यो जमानामा केटीहरु केसम्म सोच्छन् भने ‘मेरो प्रेमीले उनकी आमाभन्दा मलाई महत्व देओस् ।’
यो भ्यालेनटाइन कथा यसैमा केन्द्रित छ, जसले धेरैलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ । तर, सबै प्रेमी त्यस्ता हुँदैनन्, जो प्रेमिका लागि आमालाई ओझेलमा राख्न सकोस् किनकि आमा जो संसारकै सबैभन्दा ठूलो ममताकी खानी हुन् । तर, यहाँ बदलिँदो जमानामा आमाभन्दा ठूलो प्रेमी वा प्रेमिका भन्नेहरु पनि नहोलान् भन्ने होइन । अरु जे भएपनि यो फिल्म हेरेपछि एउटा बहस भने पक्कै सिर्जना गर्नेछ । यस फिल्मको परिकल्पना तथा निर्देशन गीतकार तथा मोडल दर्पण राई गरेका हु्न । फिल्ममा दर्पणसँगै मोडल सम्झना राईले अभिनय गरेका छन् । दर्पण अलिक फरक किसिमको काम गर्न रुचाउँछन् । त्यसैको पछिल्लो परिणाम हो यो । फिल्म हेर्नुहोला अनि आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोला ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २९, २०७४ समय: १२:१४:३७